VPS | NetComplus
Dedicated control & functionality inascalable hosting environment !
2 Cores (Shared on Xeon E5)
4 Cores (Shared on Xeon E5)
Experience The Power Of A VPS !
Why Choose NetComplus?
NetComplus သည် ရုံး၊ အိမ်အ‌ရောက် ကွန်ပျူတာ System, Network များ ပြုပြင်၊ တပ်ဆင်ပေးခြင်း၊ Domain & Hosting များ ရောင်းချပေးခြင်း၊ Facebook, Website Content များ ရေးသားပေးခြင်း၊ Business Email နှင့် Website အသစ်ပြုလုပ်ခြင်း၊ ရှိပြီးသား Website များကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း ဝန်ဆောင်မှုများကို စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် အထူးဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါသည်။